मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवले आफ्नै पार्टीका नेता विरुद्ध जथाभावी बोल्नु सुहाएन : नेता साह
रति ८:२१ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय सदस्य सँजय कुमार साहले जीतेन्द्र यादव हैसियतभन्दा बढी बोल्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
महन्थ ठाकुर नजिक मानिएको जसपाका केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र झाको बारेमा दिएको वक्तत्वप्रति उनले ध्यानाकर्षण गर्दै यादवले यसरी आवेग र भावनामा बोलेर झन पार्टीलाई धक्का पुरयाउने गरेको आरोप साहको छ ।
सहकारी बिज्ञ समेत रहेका नेता साहले डा. सुरेन्द्र झा राजनीतिमा अब्बल रहेको बताउँदै दुवै जनाले आ–आफ्नो ठाउँबाट सँयमता अपनाएर यसरी उदण्डता प्रकट नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
न्यूज ब्यूरोसँगको कुराकानीमा नेता साहले समाचारहरुमा आएको डा. झा र मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव जीतेन्द्र यादवको जुहारीको सन्दर्भमा समाजिक सँजालमा यसरी दोहोरी नखेली पार्टी एकता जोगाउन तर्फ उन्मुख हुनुभन्दा फुटाउनुतर्फ लागेकोप्रति दुःख जनाए ।
उनले अन्य दलहरुले जसपा फुटको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा आफैंमा पार्टीभित्रैको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण झन समस्या बढदै गएको बताए । उनले जीतेन्द्र यादवलाई समाजिक सँजालमा जथाभावी नलेख्नको लागि आग्रह पनि गरे । उनले राजनीतिक भावना र आवेगले नभई तार्किक हिसाबले गर्नुपर्ने सल्लाह दिए ।